umphuhlisi uphinda asebenzise i-12 ye-12 & apos; yemixholo wephepha lodonga, kwaye ilunge ngakumbi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umphuhlisi uphinde abuyele kwi-Android ye-12 & apos; s Umxholo wephepha lodonga, kwaye ulunge ngakumbi
Umphuhlisi uphinde abuyele kwi-Android ye-12 & apos; s Umxholo wephepha lodonga, kwaye ulunge ngakumbi
Izinto zokwakha Ungomnye wezinto ezininzi ezipholileyo ezithembiswa yi-Android 12 ukusizisela lo nyaka, njengoko safumanisa kumnyhadala we-I & O we-2021 kaGoogle. Olunye lolona phuculo lukhulu kwicala lobuhle iya kuba kukungeniswa kwe-Android kunye neapos yenkqubo entsha ye-UI, enokuthi ihambelane nembonakalo yefowuni yakho nakweyiphi na iphepha lodonga olisebenzisayo okwangoku.
Inkangeleko entsha isaphuhliswa kwinqanaba layo le-beta, ebonakalayo ngaphakathi I-Android 12 beta . Umxholo Wakho umxholo, kwinqanaba langoku lophuhliso, unokutshintsha kuphela inkangeleko yenkqubo yomsebenzisi kunye neenkqubo ezimbalwa zenkqubo, kunye nabaphuhlisi beenkqubo zomntu wesithathu abakanikwa amaxwebhu ayimfuneko kuGoogle ukuqala ukubandakanya iiapps zabo, nokuba.
Ekuphela kwendlela yokufumana umbono weMathiriyeli ngelixa isenziwa kunye neepos, kukukhuphela yonke inguqulelo ye-Android 12 beta OS kwifowuni yePixel, ukuba usebenzisa enye-into abasebenzisi abaqhelekileyo abatyhafileyo kuyo, kuba ngaphandle kokuba wena umdwelisi weprogram kwaye uyazi kakuhle into oyenzayo, uyenza & indlela elula kakhulu yokuphazamisa ifowuni yakho.
Umphuhlisi uDanny Lin uphinde wenza umxholo wonke we-Material You, kwaye wayenza yafumaneka kuyo yonke i-Android
Nangona kunjalo, umphuhlisi onomdla ogama linguDanny Lin uzithabathele kuye ukuba aphelise ukunxanelwa kwethu umbono omncinci womxholo omtsha, Ukuphinda uyenze kwakhona inkangeleko yonke Ngendlela egqitha ngayo nantoni na esele siyibonile kuGoogle & apos; inguqulelo yoqobo. Zijonge:
Izinto zeGoogle kunye ne-apos; iphepha lodonga kunye noDanny Lin Izinto zeGoogle kunye ne-apos; iphepha lodonga kunye noDanny Lin & apos; s
Izinto zeGoogle kunye nezinto onokufumana kuzo unokufumaneka ngokukhethekileyo kumgca wePixel kaGoogle kunye neapos. Okona kulungileyo, iPixel iqinisekile ukuba iyifumana kuqala, kunye nezinye izixhobo ezinokuthi zilinde kude kube lonyaka olandelayo, ukuze ziphuculwe. Inguqulelo kaDanny Lin kunye neapos, kwelinye icala, sele ipapashiwe kwaye ibhalwe esidlangalaleni kubaphuhlisi beapp ukuze bayenze ngokwabo umsebenzi kuzo zonke izixhobo ze-Android.
Umxholo we-UI yeLin & apos usebenzisa umxholo ojolise ngqo kwimixholo enomxholo Wemxholo Wakho-okanye, ukuba awuziva ngathi uthelekisa iphepha lodonga, unokukhetha umxholo wakho wombala wesiko. Kukho isilayidi 'esinombala' esikuvumela ukuba ulawule ubungqongqo be-hue, ukuba umdlalo wokuqala awunambityo incasa yakho.
Indalo yeLin & apos; yenziwe ngokuvulekileyo kwaye ijolise kwizixhobo ezisebenzisa i-iOS 11 ngalo mzuzu, kodwa iyahambelana neenguqulelo ezindala. Ukwenza iikhowudi okanye i-API & iiapos zayo azinxulumene okanye zixhomekeke kwi-Android 12 nangayiphi na indlela, nangona uLin ebesebenzisana noGoogle ngenxalenye yophuhliso lweZinto Wena (okanye 'i-monet,' njengoko ibizwa njalo).
Iphepha lodonga likaDanny Lin kunye neapos zinokutshintsha umxholo wemibala kwiifreyimu ezingama-90 ngomzuzwana, eziya kuhamba kakuhle ngokumangalisayo ngokuhambisa okanye ukuhambisa amaphephadonga (nangona kungabiza kakhulu kwizixhobo):
Kutheni uzikhathaza ngokwenza yonke inkqubo ye-UI xa uGoogle sele eza kuyikhupha kwiinyanga ezimbalwa, usenokubuza? Ewe, kunokuba njalo kungenxa yovavanyo. Indalo yeLin & apos; nayo inenzuzo engenakuchazeka kuba iyahambelana nazo zonke izixhobo ze-Android, endaweni yePixel nje (njengeGoogle & apos; theme).
Awunakuphikisa ukuba okwangoku, uLin ngokuqinisekileyo unombala wokukhetha umbala kwinqanaba, ngokungafaniyo neMathiriyeli kwinqanaba lakho le-beta yangoku.
lg g6 umhla wokukhutshwa
Qaphela ukukhanya kwesaziso esingama-20
Iingcebiso ngendlela yokusebenzisa iimephu zikaGoogle zokujonga isitalato kwi-Android
Ukudibanisa njani ukulala kwakho njengedatha ye-Android kunye neGoogle Fit okanye ii -apps zeSamsung S zezeMpilo
Umda we-Samsung Galaxy S6 + vs LG G4
I-AT & T ithengisa kuphela i-10,000 Moto Z2 Force handsets oko yasungulwa; Isabelo seMotorola kunye neapos; s Isabelo saseMelika sonyuka ngama-91%
I-Ubisoft isungula i-Might & Magic Elemental Guardians RPG kwi-Android nakwi-iOS